Dridran’ingilon’ny « sonnerie » tao am-bavahady no nanaitra anay mivady androany tokony ho tamin’ny dimy ora maraina, hoy izy nitantara ny zava-nitranga tamin’ny mpanao gazety taorian’ny nivoahany teny amin’ny biraon’ny Brigade Criminelle Anosy, nanaovan’ny Polisy famotorana azy.
Madamako no nivoaka nijery fa izaho teny amin’ny « Terrasse » no nitazana, hoy izy. Polisy fa vohao ny vavahady, mitady an’i Harifidy izahay, no feo re. 4x4 roa sy Polisy 12 isa no efa teo vao nivoha ny vavahady. Nampiseho « mandat » avy any amin’ny « Procureur » izy ireo, hisava ny trano, hoy ity mpanao gazety ity nanohy ny fitantarana.
Nandeha ny fisavana. 14 ny isan’ny efitrano notetezina, voasava hatramin’ny efitranon’ny « gardien ». Naharitra ora iray teo izany, fa tsy nahita na inona na inona ireo mpisava, hoy i Harifidy Ramanandraibe.
Nentina teny amin’ny BC Anosy ny tenako, hoy ity farany, taorian’izay, natao ny famotorana fa hoe mitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Nalefan’izy ireo nody aho taorian’izay, hoy izy.
Efa « prévisible » ny toe-javatra toy izao, ary tsy vao izao no misy ny ramatahora atao amin’ny mpanao gazety, indrindra amin’ireo tsy mitovy amin’ny fanjakana, hoy hatrany i Harifidy Ramanandraibe. Ho hita eo ny tohiny, hoy izy, fa ny asa mitohy ; ny Polisy manao ny asany, ny mpanao gazety manao ny asany.
Nampahatsiahy moa i Harifidy Ramanandraibe fa « Tamin’izaho nanao SN (Service National) tamin’ny taona 1987 no nitazona basy farany ».